Qolka Saxaafadda - Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie
Warbaahinta Xiriir: Weydiimaha warbaahinta waxaa la helaa maalmaha shaqada inta u dhaxeysa 8:30 AM iyo 5:00 PM:
Tom Masari Maamulaha Suuqgeynta & Isgaarsiinta (815) 668-4425 [emailka waa la ilaaliyay]
Warsidaha Helitaanka Isku midka ah
Wararka iyo sheekooyinka ku saabsan ururkeena.
Warsidaha Nofeembar 2021
Warsidaha Nofeembar 2019
Dabka Prairie 2020
Dabka Prairie 2017
Dabka Prairie 2016
Dabka Prairie waa dukumiinti sanadle ah oo kiisas xusid mudan iyo waxqabadyada qareenadeena ee Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie, Inc.
Warbixinta farqiga cadaalada 2022
Warar & Maqaallo Dhawaan
Legal Service Corp. waxay soo bandhigtaa natiijooyinka ku saabsan baahiyaha sharciga madaniga ah ee aan la daboolin ee dadka Maraykanka ah ee dakhligoodu yar yahay.
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie iyo Xildhibaanka Gobolka ayaa Bixiya Fursado Labaad Kaalmo Sharci oo Bilaash ah
Senator-ka Gobolka Steve Stadelman (D-Rockford) ayaa qabtay Shirweynihiisa Fursadaha Labaad ee 2022 Maajo 20-keedii Xarunta Nordlof ee ku taal bartamaha magaalada Rockford. In ka badan 170 qof ayaa ka soo qayb galay shirar mid-ka-mid ah oo lala yeeshay qareenno iskaa wax u qabso ah si ay u helaan kaalmo sharci oo lacag la'aan ah diyaarinta codsiyada lagu tirtirayo ama lagu xiro diiwaannada dembiyada.
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie, Caleen Cusub Illinois Bilawga 'Masixi Diiwaankaga' Ololaha Xayeysiiska
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie iyo New Leaf Illinois waxay bilaabayaan taraansit iyo olole bannaanka cusub si ay u kordhiyaan wacyiga iyo tirada shakhsiyaadka codsanaya baabi'inta xashiishadda ee aagag adeegeena.
Barnaamijka Tababarka Xagaaga ee Gobolka Prairie wuxuu siinayaa ardayda waayo-aragnimada dhabta ah ee aduunka
Laga soo bilaabo Bloomington ilaa Waukegan, iyo Rock Island ilaa Kankakee, kow, labaad, iyo sadexaad ardayda sharciga — u adeegaya sidii Prairie State Legal Services (PSLS) interns - waxay ku qaadan doonaan xagaagan inay naftooda ku dhex milmaan adeega caamka ah ee PSLS u qabato macaamiisheeda.
Aragtida Taariikhiga ah ee Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie: U dabaal degaya 45 Sano oo Adeeg ah
Talaadada, Meey 31 waxay ahayd maalin qaas ah: PSLS' 45 guurada! Wax badan ayaanu qabanay 45-kii sano ee ugu horeysay waxaana cadeynay inaan noqono kuwa caqli badan oo hal abuur leh si aan uga jawaabno caqabadaha anagoo ku sii adkaysanaynay hadafkeena ah bixinta helitaanka cadaalad ah oo siman iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka sharciga ah ee saameeya baahiyaha aasaasiga ah ee macaamiisha.
Xusuusta Agaasimaha Fulinta Aasaaska Joseph A. Dailing
Joseph (Joe) A. Dailing waxa uu dhintay aroortii hore ee Juun 9, isaga oo ka tegay dhaxal cajiib ah oo kor u qaadaya helitaanka caddaaladda ee dhammaan. Wuxuu ahaa 78 jir.
Xafiisyada PSLS way xidhan yihiin - Maalinta xusuusta
Maalinta xusuusta waxay sharfaan kuwa naftooda bixiyay iyagoo ilaalinaya nolosha kuwa kale ee adduunka oo dhan. Xuska Maalinta Xusuusta, xafiisyada PSLS waa la xidhi doonaa Isniinta, Meey 30, 2022.
Maalinta Hooyada Farxada leh Dhammaan Hooyooyinka Cajiibka ah ee halkaas jooga!
U dabaaldeg Maalinta Hooyadaada sida saxda ah adiga oo wadaagaya macluumaadka ku saabsan adeegyada Caleen Cusub Illinois iyo sida aan uga caawin karno nadiifinta diiwaannada xashiishadda.
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie VISTA waxay dhammaanaysaa Adeegga Saddexda Sano ee May 7
AmeriCorps ayaa dhawaan u dabaaldagtay todobaadka aqoonsiga qaran ee Maarso 13-19. Anigoo sharaf u ah barnaamijkayaga AmeriCorps- Volunteers in Service to America (VISTA), waxaan ku hanweynahay inaan muujino Wacyigelinta Bulshada VISTA April Foster, kaasoo soo afjari doona saddex sano oo adeeg ah xafiiska Peoria ee Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie. Barnaamijka AmeriCorps-VISTA waa qaran...
Raac oo la wadaag shabakadaha bulshada ee Adeegyada Sharciga ee Prairie State
Ha iloobin inaad booqato boggaga Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, iyo LinkedIn. Sidaad ogtahay, shirkadaha iyo shakhsiyaadka meel kasta oo ay joogaan waxay ku tiirsan yihiin shabakadaha bulshada macluumaadka iyo isgaarsiinta.